4 Elements kuDhiraivha Yekutungamira Chizvarwa neKushambadzira Mashini | Martech Zone
4 Elements kuDhiraivha Yekutungamira Chizvarwa neKushambadzira kweMagetsi
Wednesday, May 20, 2015 Chipiri, May 19, 2015 Douglas Karr
Tsvagiridzo kubva Venturebeat's kushambadzira otomatiki kudzidza inoratidza kuti, kunze kwekusiyanisa maficha epuratifomu yega yega, iro dambudziko hombe rekushambadzira michina yebhizinesi kunzwisisa kuti zvinokwana sei musangano ravo.
Zvimwe ndiyo nyaya… makambani ari kuyedza kukodzera kushambadza otomatiki pane kutsvaga chikuva chinotoenderana nemaitiro emukati, simba uye zviwanikwa. Ndaneta nazvo zvakanaka zve kushambadzira otomatiki rondedzero kana kunyange quadrant nzira. Kana isu tinoita sarudzo dzevatengesi kune vatengi vedu, isu tinoongorora zvese zvikamu zvesangano ravo kuti tiwane chikuva chakakodzera - kana mhinduro chaiyo panowanikwa mapuratifomu akakodzera. Zviri nyore kwazvo kuvaka mhinduro pane kushandura maitiro ese uye tsika yesangano.
Izvo zvakati, zvichiripo mutungamiri wechizvarwa mikana mukudyara kweanogadzira otomatiki chikuva. Hezvino zvinhu zvina izvo TechnologyAdvice yakaratidza kuti inotyaira mhedzisiro yechizvarwa mhedzisiro:
Kubatana neSales - inogona kuburitsa kuwedzera kwe20% mumikana yekutengesa.
Email Drip Campaigns - tsambambozha iri 3x yakawanda yekukasira kutenga kupfuura vezvenhau.
Mapeji ekutumira - kushandisa otomatiki pamwe chete nemapeji ekumhara zvinogona kukonzeresa mitengo yekushandurwa yakakwira se50%.
Kuita kwako uye A / B Kuedza - maemail akasarudzika anogadzira 6x iyo mari kana achienzaniswa neasina-maemail maemail.
Tags: ab testdonhwe mushandirapamweemail kudonha kampenipamapejimutungamiri wechizvarwaPersonalizationkushandira pamwe
Visa's Imwe Sign-On Checkout ndiye Anokunda!
Zvemukati Kushambadzira Chiyero cheKuratidziro uye Kusika